Izizathu Ezi-7 Okuqukethwe Kwakho Kwehluleka Ukuhambisana Neminyaka Eyinkulungwane | Martech Zone
ULwesibili, April 7, 2015 ULwesibili, April 7, 2015 Douglas Karr
Kwesinye isikhathi lapho ngifunda okutholakele kumaqembu ezindawo noma ezindawo lapho ngiyagquma kancane. Angisho ukuthi lo mbiko wokuthi iNewsCred ayibalulekile ukuthi abathengisi bawugcine engqondweni, kepha ngikholelwa ukuthi sivame ukuthambekela ekwenzeni imininingwane futhi kwesinye isikhathi sifinyelela eziphethweni ezinganembile.
Imvamisa ngibuza othile, ungathanda ukufinyelela kubantu abangu-10,000 1 abanesilinganiso sokuphendula esingu-500% noma abantu abangama-25 abanesilinganiso sokuphendula esingu-25%? Uma kwenzeka ulwa nezibalo - lokhu kokugcina kuzoholela kwabaphenduli abengeziwe abangama-XNUMX. Ngakho-ke, kwesinye isikhathi ayiyi lapho isilinganiso… kwesinye isikhathi kufanele ujule lapho kukhona khona ama-niches.
Eqinisweni, maqondana neminyaka eyizinkulungwane, ngingahle ngisho ngiphikise ngokuthi ukufinyelela Okuningi kungaba nokuzala. Imininingwane evela kulolu cwaningo ikhombisa ukuthi abafisi ukuthengiswa… ngakho-ke kungani ungakhulisa ukufinyelela kwakho ekuwathengiseni kuwo wonke la maqhinga wokuxhumana nomphakathi? Ngisengancoma imithombo yezokuxhumana njengomphakathi, kepha isu lizohluka ngokuphelele ngokususelwa kwizigaba engifuna ukuzibandakanya nazo.
Kungani ama-brand ekhathalela ama-millennials? Ngo-2020, izinkulungwane zeminyaka zizosebenzisa amandla angaphezu kwamadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 1.4. Okwemikhiqizo, lokho kusho ukuthi uma ungafinyeleli eminyakeni eyizinkulungwane eziyinkulungwane, awuhambisani nekusasa. Okuqukethwe kushayela ukuxhumana komkhiqizo, kepha uma okuqukethwe kwakho kwehluleka ngokuphelele ukubandakanya izethameli zakho eziqondiwe, kunaliphi iphuzu? Ama-62% ezinkulungwane zeminyaka azizwa ukuthi okuqukethwe ku-inthanethi kubenza bazizwe bexhumeke kakhulu futhi bethembekile kumkhiqizo, kepha ama-32% kuphela athola ukuxhumana komkhiqizo wanamuhla kuwusizo.
INewsCred inikeza lesi seluleko esilandelayo sokuhlangana neminyaka eyizinkulungwane:
Okuqukethwe kwe-Tailor kokuhlukile komuntu ngamunye izintshisekelo zamasiko.
Qiniseka ukuthi okuqukethwe ewusizo noma ewusizo ekuxazululeni izinkinga zansuku zonke zeminyaka eyizinkulungwane.
Gwema ukuthengisa-y noma ukuzikhuthaza.
Hlela ukuba okushukumisa ingqondo futhi ehlakaniphile.
Ungabhangi ubungqabavu noma izincomo zomphakathi kuphela.
Siqinisekise ukuzenzela ngenani lentengo, indawo, ubuhlanga, njll.
Sebenzisa amafomethi okulula ukuwenza gaya futhi wabelane.
Ukuze ufunde kabanzi mayelana nokusebenzisa okuqukethwe ukumaketha ezinkulungwaneni zeminyaka eyizinkulungwane, kufaka phakathi izifundo ezine zamakhemikhali ezikuthola kahle, landa Umhlahlandlela wamahhala weMillennials weNewsCred namuhla!
Tags: infographic yokuqukethweUkukhangisa Okuqukethweinfographicizigidii-infographic eyinkulungwaneizindaba